ग्लोसरी - कोविड १ V भ्याक्सिन लिनुहोस्
यस शब्दकोषले तपाईंलाई सबैभन्दा सामान्य वैज्ञानिक नियम र सामग्रीहरू बुझ्न मद्दत गर्दछ जसले कोरोनाभाइरसको जीवविज्ञान र COVID-19 को प्रसारको वर्णन गर्दछ।
यसले अनुसन्धान कागजातहरू पढ्न मद्दत गर्दछ र औषधि र भ्याक्सिन विकासमा प्रयोग भएको भाषा बुझ्नमा मद्दत गर्दछ। यसमा सार्वजनिक स्वास्थ्यमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय र बेलायत संगठनहरूको विस्तृत सूची छ, उनीहरूको संस्थागत एक्रोनिमहरू र उनीहरूको कामको विवरण।
भाइरसको जीवविज्ञान बुझ्दै
प्रोटीनहरू भाइरस र ब्याक्टेरिया जस्ता रोगजनकको सतहमा फेला पर्‍यो। एन्टीजेन्स प्रत्येक रोगजनकको लागि अद्वितीय हुन्छ। शरीरले SARS-CoV-2 भाइरसको एन्टिजेनलाई विदेशीको रूपमा मान्यता दिन्छ र यसले प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्तेजित गर्दछ।
जब रोगजनकको आनुवंशिक सामग्रीमा साना परिवर्तनहरू स .्कलन हुन्छ, तब यसको एन्टिजेन्स उनीहरूको मूल संस्करण भन्दा थोरै फरक हुन्छन्। यो RNA मा एक सामान्य घटना हो (तल परिभाषित) भाइरसहरू जस्तै SARS-CoV-2।
जब भाइरस संक्रमित व्यक्तिलाई कुनै नोक्सानी नगरीकन शरीरमा उपस्थित हुन्छ, जो एसिम्प्टोमेटिक वा प्री-लक्षणात्मक हो।
कोरोनाभाइरस - भाइरसहरूको एक परिवार जसले मानिसमा श्वासप्रश्वास र गैस्ट्रोइन्टेस्टाइनल रोगहरू निम्त्याउँछ।
कोरोनाभाइरस रोग पहिलो पटक २०१२ मा मान्यता प्राप्त भयो। यो रोग सार्स-कोभ -२ को कारणले भयो।
Deoxyribonucleic एसिड, एक अणु जसले आनुवंशिक जानकारी बोक्दछ।
मेसेन्जर आरएनए, 'पढ्न को लागी' निर्देशनहरू प्रोटीन उत्पादन गर्न।
जीवको आनुवंशिक सामग्री कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर वर्णन गर्न प्रयोग गरिएको एक शब्द। भाइरल म्यूटेशनहरू धेरै सामान्य हुन्छन्।
संक्रामक जीवहरू (जस्तै भाइरस, ब्याक्टेरिया वा परजीवीहरू) जसले रोग उत्पन्न गर्न सक्छ। SARS-CoV-2 एक रोगजनक हो।
जब भाइरसले आफैंको धेरै प्रतिहरू बनाउँदछ।
जीव वा वातावरण जहाँ भाइरस सामान्यतया बस्छ र पुन: उत्पादन गर्दछ।
Ribonucleic एसिड DNA सँग केहि समानताहरूको साथ एक अणु। यसको मुख्य भूमिका प्रोटीन बनाउन आनुवंशिक सामग्री डिकोड गर्नेमा हो। केहि भाइरसहरूमा, RNA ले DNA को सट्टा आनुवंशिक कोड बोक्दछ। SARS-CoV-2 एक आरएनए भाइरस हो। त्यहाँ मैसेन्जर आरएनए (mRNA) र आत्म-एम्प्लिफाइंग RNA सहित RNA का विभिन्न प्रकार छन्।
गम्भिर तीव्र श्वसन सिन्ड्रोम कोरोनाभाइरस २, भाइरस जसले COVID-19 लाई निम्त्याउँछ।
यी क्लब-आकारका संरचनात्मक सुविधाहरू हुन् जुन SARS-CoV-2 भाइरसको सतहमा फेला पर्दछ। यो भाइरसको अंश हो जुन मानव कोषहरूमा संलग्न हुन्छ त्यसैले भाइरस तिनीहरूलाई प्रविष्ट गर्न र संक्रमित गर्न सक्दछ। यो प्रोटीन एन्टिवाइरल्सको लागि एक उपचारात्मक लक्ष्य हो; स्पाइक प्रोटीन र मानव कोषहरू बीचको अन्तर्क्रियामा हस्तक्षेप गर्न सक्ने औषधिहरूले भाइरसहरूलाई कोषहरूमा प्रवेश गर्न र नक्कल गर्नबाट रोक्न सक्छ। स्पाइक प्रोटीन विकासमा केहि COVID-19 खोपको लागि पनि केन्द्र हो। यो शरीर द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्रतिजन हो र प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्तेजित गर्दछ, एन्टिबडीको उत्पादन सहित भाइरसलाई बेअसर गर्न सक्ने।
भाइरसले प्रतिकृति गरे जस्तै, यसले उत्परिवर्तनहरू जम्मा गर्न सक्दछ। यी उत्परिवर्तनहरूको साथ भाइरसको संस्करणलाई 'भेरियन्ट' भनिन्छ। भेरियन्टको उदय एक प्राकृतिक घटना हो। धेरै म्युटेसनले भाइरसको सम्पत्तीमा थोरै प्रभाव पार्छ, अरूले अरू प्रजातिहरूको संक्रमण र संक्रमणलाई सजिलो बनाउँदछन्। एन्टिजेनिक बहाव पनि हेर्नुहोस्।
वैज्ञानिक र चिकित्सा अनुशासन भाइरस र भाइरल रोगहरूको जीवविज्ञान, उनीहरूको उपचार र रोकथामको बारेमा बुझ्न सम्बन्धित छ। भाइरसहरु नयाँ र उदीयमान भाइरसहरु लाई इन्फ्लुएन्जा र चिकनपक्स जस्ता सामान्य संक्रमणको अध्ययन गर्छन् जसले इबोला, जीका र COVID-19 लाई निम्त्याउँदछ।
रोगजनकहरूको कारण बिरामीहरू हुन्छन् जुन मौलिक रूपमा जनावरहरूबाट मानवमा फैलिन्छ। COVID-19 एक zuneotic रोग हो।
COVID-19 कसरी फैलिन्छ र कसरी यसलाई समावेश गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्दै
यो प्राय: परीक्षणको सटीकता र विश्वसनीयता दुबै वर्णन गर्न प्रयोग गरिन्छ। COVID-19 को लागी यसको मतलब यो छ कि एक परीक्षण एक सक्रिय वा अघिल्लो COVID-19 संक्रमण को उपस्थिति वा अनुपस्थिति पुष्टि गर्न कत्तिको राम्रो छ। कुनै डायग्नोस्टिक परीक्षण वा एन्टिबडी परीक्षण १००१TP१T सही हुँदैन।
हालको वा अघिल्लो संक्रमणबाट SARS-CoV-2 भाइरसमा एन्टिबडी पत्ता लगाउँदछ।
हालको संक्रमणलाई संकेत गर्ने भाइरल सामग्री पत्ता लगाउँदछ। COVID-19 का लागि परीक्षणहरू SARS-CoV-2 को सतहमा फेला परेका भाइरल एन्टिजेनहरू नमूनामा उपस्थित छन् कि हुन्न भनेर पत्ता लगाउँदछ।
संक्रमण भएको छ तर कुनै लक्षणहरू देखाउँदै।
केस क्षमता अनुपात
लक्षणहरूको साथ मर्ने व्यक्तिको अनुपात।
संक्रामक रोगको पुष्टि गरिएको केससँग सम्बन्धित स्रोत र सम्पर्कहरूको पहिचान गर्दै। सम्पर्कहरूलाई उच्च जोखिम, कम जोखिम वा कुनै जोखिमको रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ र के गर्ने सल्लाह दिइन्छ। यो दृष्टिकोण एक संक्रमण को प्रसार लाई समावेश गर्न सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय को रूप मा प्रयोग गरीन्छ। अगाडि सम्पर्क ट्रेसि theले व्यक्ति पत्ता लगाउँदछ जुन सकारात्मक परीक्षण गर्ने व्यक्तिले भाइरसमा पास गरेको हुन सक्दछ। पछाडिको सम्पर्क ट्रेसिले व्यक्तिलाई भाइरस दिएकोमा फेला पार्ने संकेत गर्दछ जसले पछि सकारात्मक परीक्षण गरे।
एउटा परीक्षणले पुष्टि गर्न सक्दछ कि यदि कसैलाई सक्रिय SARS-CoV-2 संक्रमण छ।
संक्रमणको संख्या डबल गर्नका लागि लाग्ने समय।
के निश्चित स्वास्थ्य परिणाम (रोगहरू, वातावरणीय जोखिमहरू, घाइतेहरू), जनसंख्यामा बिभिन्न समूहमा रोगहरूको वितरण, उनीहरूको कारण के हो र समयको साथ परिवर्तनहरू के कारण हुँदैछ भन्ने अध्ययन। महामारी विज्ञान अनुसंधानबाट ज्ञान संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्न उपायहरू डिजाइन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
अधिक मृत्यु दर
कहिलेकाँहीलाई बढी मृत्युहरू पनि भनिन्छ, यो अतिरिक्त समयावधिमा हुने मृत्युको संख्या हो जुन प्राय: सोचेभन्दा बढी हुन्छ। उदाहरणको लागि, यदि १ हप्तामा सामान्यतया 500०० मृत्युहरू थिए, तर 5050० रिपोर्ट गरिएको थियो भने यसले २ 250० भन्दा बढी मृत्यु हुने गर्दछ। लेख्ने समयमा त्यहाँ भएको छ इ England्ल्यान्डमा deaths 63,40०१ बढी मृत्यु भयो २० मार्च २०२० देखि।
गलत परिणाम। उदाहरण को लागी, जब एक SARS-CoV-2 संक्रमण को साथ नकारात्मक परीक्षण।
गलत परिणाम। उदाहरण को लागी, जब एक SARS-CoV-2 संक्रमण परीक्षण छैन सकारात्मक।
संक्रमण संक्रमण दर
संक्रमित व्यक्तिको अनुपात।
दस्तावेज जो एक व्यक्तिको प्रतिरक्षा स्थिति इंगित गर्दछ। COVID-19 को लागी यो पछिल्लो संक्रमण को कारण कसैलाई खोप लगाइएको छ वा एन्टिबडीहरु छ कि छैन मा आधारित हुन सक्छ। प्रतिरक्षा पासपोर्टको प्रभावकारिताको बारेमा अपर्याप्त प्रमाण छ। यो किनभने SARS-CoV-2 एन्टिबडीहरू हुनुको अर्थ यो होइन कि कोही दोस्रो संक्रमणबाट सुरक्षित छ। खोप पछिको रोग प्रतिरोध क्षमताको अवधि पनि अस्पष्ट छ।
एक विशेष समयावधि अवधिमा जनसंख्यामा रोगको नयाँ केसहरूको संख्या। घटना दरहरूको गणनाले जनसंख्यामा संक्रामक रोग कति चाँडो भइरहेको छ भनेर संकेत गर्न सक्छ।
संक्रमित हुने र लक्षणहरू देखाउने बीचको समय। COVID-19 को लागि यो औसतमा करीव days दिन हुन्छ।
रोगको प्रकोपमा बिरामी जो स्वास्थ्य अधिकारीहरु द्वारा पहिचान गरिएको थियो।
LAMP परीक्षण वा RT-LAMP परीक्षण (रिभर्स ट्रान्सक्रिप्शन लूप-मध्यस्थता isothermal AMPlifications)
एक वैज्ञानिक तकनीक पत्ता लगाउन र भाइरल आनुवंशिक सामग्रीको मात्रा वृद्धि गर्न। LAMP टेक्नोलोजी प्रयोग गरीरहेको उपकरण परीक्षण गरीरहेको व्यक्तिको नजीक भेट्न सकिन्छ र प्रयोगशाला प्रसंस्करणका लागि नमूनाहरू पठाउनुको सट्टा मिनेटमा परिणाम दिन सक्दछ।
सक्रिय संक्रमण पत्ता लगाउन आणविक परीक्षणको एक प्रकार। परीक्षणहरू समावेश गर्दछ एन्टिबडीहरू त्यो प्रोटिनमा बाँध्छ (प्रतिजन) भाइरसको सतहमा यदि यो नमूनामा छ भने। सकारात्मक परिणामलाई अँध्यारो ब्यान्ड वा टेस्ट किटमा फ्लोरोसेंट चमकको रूपमा देखीन्छ, सामान्यतया केही मिनेट भित्र।
नमूनाहरूमा विशिष्ट अणुहरू (जस्तै भाइरल प्रोटिनहरू) पहिचान गर्न प्रयोगशाला टेक्निक।
एसिम्प्टोमेटिक व्यक्तिहरूको एक ठूलो नमूनामा परीक्षणहरू प्रयोग गरेर जो अहिले संक्रमित छन्।
एक परीक्षण जसले भाइरल आनुवंशिक सामग्री मार्फत पत्ता लगाउँदछ PCR वा नयाँ प्रयोगशाला टेक्निकहरू।
एक अवधि रोग, चोट वा अशक्तता वर्णन गर्न प्रयोग गरिएको। कोमोरबिडिटी वा मल्टिमर्बिडिटी कहिलेकाँही प्रयोग गरिन्छ र सन्दर्भ हुन्छ जब कसैलाई एकै समयमा एक भन्दा बढी अवस्था हुन्छ।
शब्द जसको अर्थ मृत्यु हो। मृत्यु दर सम्पूर्ण जनसंख्याद्वारा विभाजित दिइएको कारणको लागि मृत्युको संख्याको अभिव्यक्ति हो।
गैर-औषधि हस्तक्षेप (NPIs)
संक्रामक रोगको प्रसारण सीमित गर्न गैर-औषधि उपायहरू। यी व्यक्तिगत स्तरमा उपायहरू हुन सक्छन् जस्तै शारीरिक दूरी, अनुहार मास्क र कभरिingsको प्रयोग, र सुधारिएको स्वच्छता उपायहरू। तिनीहरू गतिविधि सीमित गर्न उपायहरू पनि हुन सक्छन्, जस्तै खेलकुद स्थलहरू, पबहरू वा पसलहरू सहित विभिन्न परिसरको समापन।
PCR (Polymerase चेन रिएक्शन) परीक्षण
नमूनामा DNA वा RNA को मात्रा बढाउनको लागि प्रयोग गरिएको एक विशेष प्रयोगशाला विधि जसले यसलाई परीक्षण गर्न पर्याप्त छ। पीसीआर परीक्षणहरू नमूनाहरूमा RNA पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ यदि ती नमूनेहरूमा SARS-CoV-2 भाइरस छ कि भनेर हेर्नका लागि।
पोइन्ट अफ केयर टेस्ट
एक नैदानिक परीक्षण एक प्रशिक्षित अपरेटर द्वारा व्यक्तिको नजिक वा नजिकै प्रदर्शन गरिएको थियो (जस्तै मूत्र पथ संक्रमणको लागि जाँच गर्न एक मूत्र डिपस्टिक)।
पोल्ड गरिएको परीक्षण
एक परीक्षण प्रयोग गरेर व्यक्तिहरूको समूहबाट नमूनाहरू परीक्षण गर्न दृष्टिकोण।
एक मापन जसले व्यक्तिको अनुपातलाई व्यक्त गर्दछ जुन एक समय अवधिमा वा समयमा एक रोग हो। रोगको लागि प्रसार दरहरू नमूनामा व्यक्तिहरूको कुल संख्या द्वारा केसहरूको संख्या विभाजन गरेर गणना गरिन्छ। तिनीहरू प्रतिशतको रूपमा वा प्रति १००,००० व्यक्तिको रूपमा व्यक्त गर्न सकिन्छ। यो अक्सर सँगसँगै प्रयोग गरिन्छ घटना, तर ती विभिन्न चीज मतलब। जबकि घटनाहरूले तोकिएको अवधिको अवधिमा केवल नयाँ केसहरूको गणना गर्दछ, व्यापकताले अवस्थित र नयाँ दुबै मामलाहरूको गणना गर्दछ।
व्यक्ति जो एक देश, शहर वा कार्यस्थल जस्ता व्यक्तिहरूको समूहमा संक्रामक रोग ल्याउँछ।
आर (प्रजनन संख्या)
कसरी रोग फैलिन्छ को एक उपाय। आर संख्या व्यक्तिको औसत संख्या हो जुन एक संक्रमित व्यक्ति भाइरसमा पार हुन्छ। यदि आर १ भन्दा बढी छ भने संक्रमण जनसंख्यामा फैलिनेछ। कुनै उपायहरू बिना, SARS-CoV-2 का लागि R is हो।
जबकि यसले परीक्षणलाई बुझाउँदछ जुन घण्टाको सट्टामा मिनेटमा परिणाम दिन सक्दछ, परीक्षणलाई अझै विशेष उपकरणहरू र / वा प्रशिक्षित अपरेटरहरू आवश्यक पर्दछ।
एक परीक्षण जसले एक लार नमूना प्रयोग गर्दछ।
वर्णन गर्दछ जब एक व्यक्तिले आफ्नो नमूना लिन्छ जुन प्रक्रियाको परिणाम र व्याख्याको लागि अन्य ठाउँमा पठाइन्छ।
एक परीक्षणले COVID-19 भएका व्यक्तिहरूको लागि सकारात्मक परिणामको रिपोर्ट गर्छ।
एक व्यक्तिमा देखा पर्ने लक्षणहरू बीचको समय तिनीहरूमा संक्रमित भएको लक्षणमा देखा पर्दछ।
एक परीक्षण कसरी COVID-19 छैन जो मानिस को लागी नकारात्मक परिणाम रिपोर्ट गर्दछ।
Swab परीक्षण र आत्म swabbing
आत्म-नमूना प्रयोग गर्ने एक प्रकार नाक र घाँटीबाट परीक्षणका लागि नमूना लिन एउटा टेक्निक.
प्रक्रिया जसद्वारा एक रोगजनक, भाइरस जस्तै, संक्रमित व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ।
सर्तहरू COVID-19 को बारे मा अनुसन्धान मा प्रयोग
खोप एक ठूलो समूह (धेरै सयौं) मा परीक्षण गरीन्छ कि खोप लगातार काम गर्छ कि गर्दैन भनेर, प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया मूल्या assess्कन गर्न र साइड इफेक्टहरू हेर्नको लागि।
खोप प्राकृतिक बिरामी अवस्थामा धेरै ठूलो मात्रामा (हजारौं व्यक्ति) अध्ययन गरिन्छ। यसले दुर्लभ साइड इफेक्टहरू पहिचान गर्न र खोप वास्तविक संसारमा कत्ति राम्रोसँग काम गर्दछ भनेर मूल्या to्कन गर्न पर्याप्त डेटा उत्पादन गर्दछ; के यसले di लाई कम गर्न र कम गर्न पर्याप्त प्रतिरोधात्मक क्षमता उत्पन्न गर्दछ
इजाजतपत्र पछि, अनुसन्धानले कुनै प्रतिकूल प्रभावहरू निगरानी गर्न र दीर्घकालीन प्रभावकारिता निर्धारण गर्न जारी राख्दछ। यस गतिविधिलाई फार्माकोविजिलेन्स भनिन्छ।
COVID-19 वा COVID-19 खोपको लागि उपचार जस्ता औषधीको बारेमा छलफल गर्दा, यसले वास्तविक संसारको सेटिंग्समा प्रयोग भएको बेलामा औषधीले कत्ति राम्रोसँग हासिल गर्छ भनेर बुझाउँदछ। उदाहरण को लागी, जब एक उपचारात्मक को लागी कडा अनुसन्धान शर्तहरुमा स्वस्थ युवा मानिसहरु को एक अनुसन्धान अध्ययन को लागी रोग को 90% को कम गर्न सक्दछ, यो हासिल हुन सक्दैन जब यो विभिन्न सुविधाहरु संग मानिस को व्यापक जनसंख्या मा प्रयोग गरीन्छ, जस्तै। पाको उमेरका व्यक्तिहरू वा अन्तर्निहित स्वास्थ्य अवस्थाको साथ।
एक औषधि को उद्देश्य को रूप मा काम गर्दछ जब यो आदर्श परिस्थितिहरुमा परीक्षण गरीन्छ जस्तै नियन्त्रणित अनुसन्धान अध्ययनमा। उदाहरण को लागी, एक COVID-19 खोप रोग को रोकथाम मा 90% प्रभावकारिता हुन सक्छ। यसको मतलव यो रोगको केसहरू inated ०१ टीटीपी १ टीले टीका बनाम बनाइएको।
मानव चुनौती अध्ययन
अध्ययन गर्नुहोस् जहाँ स्वस्थ स्वयम्सेवकहरूलाई नियन्त्रित सेटि inहरूमा रोगजनक सावधानीपूर्वक दिइन्छ, जसले यसैले यसलाई 'चुनौती' दिइन्छ। यी अध्ययनहरूले संक्रमण प्रक्रियालाई राम्रोसँग बुझ्न र यसलाई कसरी रोक्न र यसको उपचार गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाउँदछन्।
पदार्थ वा उपचार जुनसँग कुनै क्लिनिकल प्रभाव हुँदैन नियन्त्रण समूहहरू ताकि एक को प्रभावहरु हस्तक्षेप भर्खरै आएको सुधारबाट अलग गर्न सकिन्छ प्लेसबो प्रभाव.
अनियमित नियन्त्रण परीक्षण
एउटा प्रयोग जहाँ सहभागीहरू अनियमित रूपमा नियन्त्रण समूह वा एक हस्तक्षेप समूहमा राखिन्छन्। क्लस्टर अनियमित नियंत्रित परीक्षणहरू समूह स्तरमा नियन्त्रण वा हस्तक्षेप गर्न अनियमित असाइनमेन्ट समावेश गर्नुहोस् (जस्तै पूरा स्कूल, अस्पताल वा स्थानीय काउन्सिलहरू प्रदान गर्ने)। तिनीहरू विशेष गरी मानिन्छन् बलियो अनियमितकरणको रूपमा अध्ययन प्रकारले पूर्वाग्रहको सम्भावना कम गर्दछ बाह्य भ्यारीएबल। प्रयोगको रूपमा, तिनीहरू प्रदर्शन गर्न सक्छन् कारण.
सर्तहरू औषधि विकास र COVID-19 उपचारमा प्रयोग गरियो
यो शब्द खोपहरू लगायतका लागी औषधीको प्रतिक्रियाहरूको दायरा वर्णन गर्न प्रयोग गरीन्छ। तिनीहरूलाई कहिलेकाँही प्रतिकूल प्रतिक्रियाहरू पनि भनिन्छ। बिभिन्न औषधिहरूले बिभिन्न प्रभाव उत्पन्न गर्न सक्दछ। साइड इफेक्ट ती हुन् जुन खोपसँग जोड्न सकिन्छ। या त आफैंमा औषधीको सिधा नतिजाको रूपमा वा व्यक्तिले अन्तर्निहित मेडिकल अवस्था भएकोले व्यक्तिको प्रतिक्रिया हुन सक्छ। कहिलेकाँही व्यक्तिले औषधि लिँदा केहि अनुभव गर्न सक्दछन्, तर जुन पूर्ण रूपमा असम्बन्धित छ। औषधि सुरक्षाको व्यापक अनुगमनले निर्धारण गर्न सक्दछ कि कुन प्रतिक्रियाहरू लागू हुँदैन जुन उनीहरूबाट एक औषधिसँग सम्बन्धित छ। खोपहरूबाट साइड इफेक्टहरू पूर्वानुमान योग्य हल्का प्रतिक्रियाहरू भन्दा अलिक समयका ज्वरो भन्दा बढी गम्भीर र दुर्लभ परिणामहरू जस्तो एलर्जी प्रतिक्रिया जस्ता फरक हुन्छन्।
SARS-CoV-2 बिरूद्ध एन्टिबडीमा आधारित उपचारहरू COVID-19 बिरामीहरूको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
औषधिहरू भाइरल संक्रमणको रोकथाम गर्न वा उपचार गर्न प्रयोग। केहि एन्टिभाइरल्स भाइरसहरूलाई कोशिकामा छिर्न रोक्दा काम गर्दछन् जबकि अरूले भाइरस जीवन चक्रको चरणहरू रोक्दछन्, जस्तै भाइरसलाई दोहोर्याउनबाट रोक्न। COVID-19 को उपचारका लागि धेरै एन्टिभाइरल औषधिहरू मूल्या being्कन भैरहेको छ तर कुनैले अहिलेसम्म परीक्षणमा कुनै महत्वपूर्ण क्लिनिकल लाभ देखाउँदैन।
एक उपचार जसले सार्स-कोभ -२ बिरूद्ध एन्टिबडीहरू प्रयोग गर्दछ बिरामीहरूबाट लिईन्छ जो COVID-१ from बाट पुनः प्राप्त गरियो। सिद्धान्त यो हो कि प्लाज्मामा दान गरिएको एन्टिबडीज भाइरसलाई बेअसर गर्न सक्दछन् जबकि बिरामीको आफ्नै प्रतिरक्षा प्रणालीले संक्रमणलाई प्रतिक्रिया गर्दछ।
एक स्टेरोइड औषधि प्रदाह र एलर्जी विकारहरूको दायरा उपचार गर्न प्रयोग। अस्पतालमा भर्ती COVID-१ patients बिरामीहरूमा, यसले ti 35१टीपी १ टी द्वारा हावा आवतजावत बिरामीहरूको मृत्युलाई घटाउँछ र २०१२TP1T द्वारा अक्सिजन आवाश्यक पर्ने बिरामीहरूको मृत्युलाई घटाउँछ।
राम्रो उत्पादन अभ्यास (GMP)
यो न्यूनतम मानक हो जुन औषधि निर्माणकर्ताहरूले उत्पादन प्रक्रियामा पूरा गर्नै पर्दछ। यो सुनिश्चित गर्नका लागि कि ड्रगहरू ब्याचहरूमा लगातार उच्च गुणस्तरको छन् र उनीहरूले औषधिको मार्केटि author प्राधिकरणमा नियामकहरूले तोकेको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछन्।
एक औषधि बजार गर्न लाइसेन्स
मार्केटिंग प्राधिकरणको रूपमा पनि चिनिन्छ। युके र ईयुमा एउटा खोप जस्ता औषधि बेच्न निर्माताहरूले विशेष प्रक्रियाहरूको पालना गर्नै पर्दछ। यो जटिल छ, चिकित्सामा निर्भर विभिन्न प्रक्रियाहरूको साथ।
जैविक चिकित्सा प्रयोगशालामा संश्लेषित। उनीहरूले कोषको सतहहरूमा निर्दिष्ट लक्षित प्रोटीन पहिचान गरेर प्राकृतिक कोषहरूको नक्कल गर्छन् र त्यसपछि ती कोषहरूलाई मार्ने झण्डा लगाएर वा भाइरससँग सिधा बाँधेर र भाइरसलाई मानव कोशमा जोड्न रोक्दछन्। एन्टिबडीहरू भाइरसबाट चासोको आनुवंशिक अनुक्रम प्रयोग गरेर डिजाइन गर्न सकिन्छ। SARS-CoV-2 मोनोक्लोनल प्रतिजीवीहरूको मुख्य लक्ष्य भनेको भाइरसको सतहमा स्पाइक प्रोटीन हो, कोषहरूमा भाइरल प्रवेश ब्लक गर्न।
पत्ता लगाउने, स collecting्कलन र अनुगमन डेटा प्रतिकूल घटनाहरू जुन एक औषधिसँग जोडिएको हुन सक्छ (जस्तै नयाँ औषधि वा भ्याक्सिन) ताकि उचित कार्यवाही गर्न सक।
अस्पतालमा भर्ना गरिएको COVID-19 बिरामीहरूको पेटमा। अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि यसले उनीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउँछ किनभने यसले शरीरमा अक्सिजनेशन सुधार गर्दछ।
एक प्रयोगात्मक एन्टी-वायरल औषधि। आजको शोधले देखाउँदछ कि यसले केही बिरामीहरूका लागि रिकभर हुने समय घटाउन सक्छ।
सर्तहरू COVID-19, प्रतिरक्षण र भ्याक्सिन प्रतिरोधात्मक क्षमताको बारेमा छलफल गर्नका लागि प्रयोग गरियो
सक्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया
प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया नयाँ रोगजनकको साथ पहिलो भेट भएपछि शरीरले स्वाभाविक रूपमा विकास गरेको हो। एक निश्चित समय पछि, शरीरले एन्टिबडीहरू उत्पादन गर्न सुरु गर्दछ जुन नयाँ रोगजनकलाई विशेष रूपमा पहिचान गर्न सक्षम छ।
खोपहरू जहाँ एक हानिरहित भाइरस परिमार्जन गरिएको छ रोगजनकको प्रोटीनको आनुवंशिक जानकारी (प्रतिजन)। खोप पछि, शरीरले यो प्रोटीन उत्पादन गर्दछ र यसको बिरूद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकास गर्दछ। यो रणनीति उदाहरणको लागि, अक्सफोर्ड / एस्ट्राजेनेका खोप विश्वविद्यालयमा प्रयोग गरिएको छ, जसमा सार्स-कोभ -२ स्पाइक प्रोटीनको आनुवंशिक जानकारी समावेश छ।
एक 'ट्याग' जुन विशेष गरी रोगको अंशमा बाँध्छ त्यसैले यसलाई प्रतिरोधात्मक प्रणाली द्वारा पहिचान गर्न सकिन्छ। यो 'अनुकूलक' प्रतिरक्षा प्रणालीको हिस्सा हो र बी कोषहरू द्वारा उत्पादित। केहि एन्टिबडीहरू एन्टिबडीहरू बाध्यकारी हुन्छन् (तिनीहरू भाइरससँग बाँधिन्छन् र शरीरको प्रतिक्रिया बढाउन प्रतिरोधात्मक प्रणालीको भागहरू सक्रिय गर्दछन्) र केहि एन्टिबडीहरूलाई बेवास्ता गरिरहेका हुन्छन् (तिनीहरू भाइरसलाई बाँध्न र बन्द गर्न सक्षम छन्)। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका एन्टिबडीहरू छन्। दुई महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू:
आईजीएम: प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाको बेला भोली बी कोशिकाद्वारा उत्पादित पहिलो एन्टिबडीहरू। तिनीहरू माध्यमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाको बखत समान स्तरहरूमा पत्ता लगाइन्छन्। आईजीजी: रगतमा एन्टिबडीहरूको प्रमुख वर्ग। तिनीहरू आईजीएम पछि प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाको समयमा उत्पादन हुन्छन् र उनीहरूको स्तर माध्यमिक प्रतिक्रियाको बखत पर्याप्त वृद्धि हुन्छ।
प्रत्यक्ष attenuated खोप हेर्नुहोस्।
सेता रक्त कोषिको प्रकारले एन्टिबडीहरू उत्पादन गर्दछ। नाभवे बी कोषहरू अपरिपक्व बी कोशिका हुन् जुन अहिलेसम्म रोगजनकमा पर्न सकेको छैन। एकचोटि खुला भएपछि, तिनीहरू मेमोरी बी कोषहरू बन्न सक्छन्, जुन खास रोगजनकको बिरूद्ध एन्टिबडीहरू सक्रेट गर्न सक्षम हुन्छ।
'प्राइम डोज' पछि खोपको अतिरिक्त खुराक। यो रोगजनक विरूद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन प्रयोग गरिन्छ।
केहि औषधि र भ्याक्सिनहरूको आपूर्ति श्रृंखलालाई जनाउँछ, जुन उत्पादनबाट वितरणसम्म तापमान-नियन्त्रण वातावरणमा हुनु आवश्यक छ।
रसायनले शरीरमा रोगजनकको उपस्थिति सaling्केत गर्दछ। तिनीहरू जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणालीको एक भाग हुन् र ईन्फ्लेमेसन निम्त्याउँछन्।
रोग परिमार्जन भ्याक्सिन
खोपले रोगहरूको गम्भीरतालाई कम गर्दछ। उदाहरणको लागि COVID-19 को मामला मा, ती सार्स-कोभ -2संक्रमण पछि कम मृत्यु हुन सक्छ।
DNA- आधारित खोपहरू
खोपहरू जहाँ DNA ले एक रोगजनकको प्रोटीन बनाउन निर्देशनहरू सिधा प्राप्तकर्तामा ईन्जेक्सन गरिन्छ। अमेरिकामा आधारित इनोभियो उम्मेद्वार वा कोरियाली जेनेक्साइन उम्मेद्वारले यो रणनीति प्रयोग गर्छन्।
जब जनसंख्यामा पर्याप्त व्यक्ति संक्रमणको लागि प्रतिरक्षा हुन्छन् जसले कि जो प्रतिरक्षा छैन तिनीहरूलाई पनि सुरक्षित राखिन्छ। यसलाई 'जनसंख्या प्रतिरक्षा' पनि भनिन्छ।
जब व्यक्तिहरू रोगबाट सुरक्षित हुन्छन्, या त प्राकृतिक संक्रमण वा खोप पछ्याउँदै।
एक रोगजनक द्वारा संक्रमित हुँदा शरीर द्वारा प्रतिक्रियाको विकास। प्राथमिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पहिलो प्रतिक्रिया हो जुन एक रोगजनकको संपर्कमा ट्रिगर हुन्छ। अपरिपक्व (भोली) बी कोशिका एन्टिजेनहरू द्वारा उत्प्रेरित हुन्छन्, सक्रिय हुन्छन्, र यी एन्टिजेन्सहरूमा टाँसिएका एन्टिबडीहरू उत्पादन गर्न शुरू गर्दछन्। त्यहाँ एन्टिबडीहरूको प्रारम्भिक वृद्धि हुनेछ र त्यसपछि समयसँगै, यी एन्टिबडीको स्तरहरू कम हुनेछन् संक्रमण खाली भएपछि। माध्यमिक प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रिया दोस्रो र उही एक्सपोजर पछि उहि रोगजनकको लागि हुन्छ। मेमोरी बी कोषहरूले एन्टिजेन्सहरू पहिचान गर्न सक्षम हुन्छन् जुन उनीहरूलाई पहिले देखाइएको थियो र प्राथमिक प्रतिक्रियाको बेला भन्दा उच्च मात्रामा एन्टबडीहरू उत्पादन गर्न सुरु गर्दछ।
रोगजनकको संक्रमणबाट शरीरको रक्षा गर्ने क्षमता। नयाँ प्रतिरोधात्मक क्षमताले गैर-विशिष्ट संयन्त्रहरूको श्रृंखला समावेश गर्दछ जुन रोगजनकहरूलाई शरीरमा आक्रमण गर्नबाट रोक्छ। यसमा शारीरिक अवरोधहरू, जस्तै छाला, र आन्तरिक शरीरका भागहरूको सेल लाइनिंगहरू, जस्तै एयरवेज र फोक्सो समावेश गर्दछ। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणालीमा विभिन्न प्रकारका विशेष कक्षहरू र स chemical्केतन रसायनहरू हुन्छन्। प्राप्त प्रतिरक्षाले कसरी शरीरको प्रतिरक्षा स्मृति निर्माण गर्दछ भनेर वर्णन गर्दछ - ताकि यदि व्यक्तिलाई फेरि उही संक्रमणको प्रभावमा पर्‍यो भने शरीरको प्रतिक्रिया बढाइन्छ। यसलाई 'अनुकूलक' प्रतिरोधक क्षमता पनि भनिन्छ। यो भ्याक्सिनको साथ खोपको आधार हो। यस अनुकूलनीय प्रतिक्रियाको प्रमुख सुविधाहरू यो हुन् कि यो एक विशिष्ट रोगजनकमा संरचनाहरूको लागि विशिष्ट हो र त्यो प्रतिरक्षा मेमोरी पछिल्ला भेटहरूमा सुधार प्रतिक्रिया प्रदान गर्दछ। यसले एन्टिबडी, बी सेल र टि सेलहरू समावेश गर्दछ। यस प्रकारको प्रतिरोधक क्षमता कडा वा कमजोर, छोटो वा लामो समयसम्म रहन सक्छ, र यो धेरै कारकहरूको एक जटिल परिणाम हो। यस प्रकारको प्रतिरोध क्षमता विकास गर्न It हप्ता सम्म लिन सक्दछ।
खोपहरू जहाँ एक रोगजनक मारिएको छ र त्यसैले मानव शरीरमा गुणा गर्न सक्दैन। Valneva खोप उम्मेदवार यो रणनीति को उपयोग गर्दछ। लाइभ-एटेनुटेड टीकाले रोगजनकको कमजोर संस्करण प्रयोग गर्दछ जुन रोगको कारण गर्दछ। जब ईन्जेक्सन गरिन्छ, तिनीहरू प्राकृतिक संक्रमण जस्तो देखिन्छन् र यस कारणका लागि एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ट्रिगर गर्न सक्षम छन्। mRNA खोपले mRNA समावेश गर्दछ, एक रोगजनकको एन्टिजेन उत्पादन गर्दछ, जुन सीधा मानव शरीर द्वारा उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो रणनीति फाइजर / बायोएनटेक खोपमा प्रयोग हुन्छ, जसले सार्स-कोभ -२ स्पाइक प्रोटिन उत्पादन गर्न mRNA निर्देशनहरू प्रयोग गर्दछ।
प्राकृतिक रूपमा प्रतिरक्षा प्राप्त भयो
रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता प्राप्त गरिन्छ जब एक व्यक्ति एक रोगजनक बाट संक्रमित हुन्छ र यसको बिरूद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया विकास गर्दछ (सक्रिय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया र प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हेर्नुहोस्)।
एन्टिबडीहरू भाइरसलाई बाँध्न र बन्द गर्न सक्षम छन्।
प्रारम्भिक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ट्रिगर गर्न खोपको पहिलो खुराक।
जब एक व्यक्ति (जो एक रोगजनकको बिरूद्ध एन्टिबडीहरू उत्पादन गर्न सक्षम छैन) ले बाहिरी रूपमा उनीहरूलाई ग्रहण गर्दछ र रोगजनकबाट सुरक्षित हुन्छन्। यो 'मातृ' हुन सक्छ, जब एन्टिबडीहरू आमाबाट बच्चामा (उदाहरणका लागि स्तनको दूधमा) वा 'कृत्रिम' हुन्छन्, जब एन्टिबडीहरू इन्जेक्शन मार्फत प्रशासित हुन्छन् (जस्तै एन्टिबडी थेरापीको मामलामा)। यो एक स्थायी प्रतिरक्षा छैन।
रोगजनकको सतहमा पाइने प्रोटीन समावेश गर्दछ जुन प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया ट्रिगर गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो रणनीति GSK / Sanofi पाश्चर उम्मेद्वार द्वारा प्रयोग गरीन्छ।
आरएनए प्रोटीन बनाउन पढ्नु अघि आफैंको धेरै प्रतिहरू सिर्जना गर्न सक्षम भयो। इम्पीरियल कलेज खोप उम्मेद्वारले यस प्रविधि प्रयोग गर्छन्।
खोपले शरीरमा नक्कल गर्नबाट रोगजनकलाई रोक्न सक्षम गर्दछ, ताकि संक्रमित व्यक्ति अन्यमा सार्न सक्दैन।
व्यक्तिलाई खोपबाट उपचार गरेर रोगबाट जोगाउँदै।
सबै भन्दा प्रभावकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप मानिसहरूलाई संक्रामक रोगहरूबाट बचाउनको लागि। खोपहरूले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई रोगजनक पहिचान गर्न र अर्को भेटमा शरीरबाट यसको रक्षा गर्न प्रशिक्षण दिन्छ।
विकास अन्तर्गत नयाँ खोप।
भ्याक्सिन लिने जनसंख्याको प्रतिशत।
खोप स्वीकार गर्दै जब यो सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारीहरु द्वारा प्रस्ताव गरिन्छ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य र औषधि नियमनमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू
रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू। अमेरिकाको संघीय स्वास्थ्य सुरक्षा एजेन्सी।
यूरोपीयन चिकित्सा एजेन्सी। एक यूरोपीय एजेन्सी जसले विकास र औषधिहरूको पहुँचमा सहयोग पुर्‍याउँछ, र नयाँ औषधिहरूको मूल्याates्कन गर्दछ ताकि ती व्यक्तिमा प्रयोगको लागि अनुमोदित हुन सक्छन्।
खाद्य र औषधि प्रशासन। एक अमेरिकी एजेन्सी जसले सुरक्षा, प्रभावकारिता र औषधिहरूको गुणस्तर नियन्त्रित गर्दछ। यो सार्वजनिक स्वास्थ्य जस्तै खाद्य सुरक्षा र सुर्तीजन्य उत्पादनहरु को नियमन मा एक व्यापक भूमिका छ।
विश्व स्वास्थ्य संस्था। संयुक्त राष्ट्र एजेन्सीले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्यको निर्देशन र समन्वयमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
COVID-19 लाई प्रतिक्रियामा सार्वजनिक स्वास्थ्य, औषधि नियमन, निर्णय लिने र वैज्ञानिक सल्लाहमा संलग्न युके संगठनहरू
मुख्य वैज्ञानिक सल्लाहकार। अधिकांश वरिष्ठ सरकारी सल्लाहकार वैज्ञानिक सल्लाहका साथ सरकारी विभागहरू प्रदान गर्दछ। धेरै जसो सरकारी विभागहरुमा एक छ। त्यहाँ प्रत्येक विकृत प्रशासन को लागी CSA हरू छन्। सूची यहाँ उपलब्ध छ।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी। एक योग्य चिकित्सा चिकित्सक जो स्वास्थ्य मामिलामा सबैभन्दा वरिष्ठ सरकारी सल्लाहकार हो।
मानव औषधि आयोग। एक सल्लाहकार गैर विभागीय सार्वजनिक निकाय जसले औषधि उत्पादनहरूको सुरक्षा, प्रभावकारिता र गुणस्तरमा मन्त्रीहरूलाई सल्लाह दिन्छ।
स्वास्थ्य र सामाजिक हेरचाहको लागि विभाग। स्वास्थ्य र हेरचाह सेवाहरूको लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारीको साथ एक मन्त्री सरकारी विभाग। यसले इ strategy्ल्याण्डमा रणनीति, कोष र कोषहरूको हेरचाह गर्दछ र हेरचाह राष्ट्रहरूमा बराबर समकक्षहरू सहित।
सरकार प्रमुख वैज्ञानिक सल्लाहकार। मुख्य वैज्ञानिक सल्लाहकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई वैज्ञानिक सल्लाह प्रदान गर्दै तथा मुख्य वैज्ञानिक सल्लाहकार नेटवर्कको समन्वय गर्दै।
संयुक्त जैव सुरक्षा केन्द्र। मे २०२० मा स्थापित। यो COVID-१ 19 प्रकोपको प्रतिक्रियामा स्थानीय र राष्ट्रिय निर्णय-निर्णय सूचित गर्न प्रमाण-आधारित विश्लेषण प्रदान गर्दछ। यो एक पटक यो सेट अप भए पछि NIHP को हिस्सा बन्छ।
खोप र खोप सम्बन्धी संयुक्त समिति। एक वैज्ञानिक सल्लाहकार समिति जसले युकेका स्वास्थ्य विभागहरूलाई खोपको बारेमा सल्लाह दिन्छ।
औषधि र स्वास्थ्य सेवाहरू नियामक एजेन्सी। स्वास्थ्य र सामाजिक सेवा विभाग को एक कार्यकारी एजेन्सी। यो औषधी, मेडिकल उपकरण र रगत अवयवहरू विनियमित गर्दछ युकेमा ट्रान्सफ्यूजनमा प्रयोग। यसले खोपहरू जस्ता नयाँ औषधीहरू अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्दछ।
नयाँ र उभरते श्वासप्रश्वास भाइरस धम्की सल्लाहकार समूह। एक वैज्ञानिक समिति जसले सरकारलाई नयाँ र उभरते श्वासप्रश्वास भाइरसहरूको खतराको बारेमा सल्लाह दिन्छ। NERVTAG बाट सल्लाह SAGE द्वारा प्रयोग गरीएको छ।
स्वास्थ्य र हेरचाह उत्कृष्टताको लागि राष्ट्रिय संस्थान। एक हातको लम्बाइ शरीर स्वास्थ्य र सामाजिक हेरचाह विभागमा उत्तरदायी तर सरकारबाट स्वतन्त्र छ। यसको भूमिका भनेको राष्ट्रिय मार्गदर्शन र सल्लाह, र गुणस्तरको मापदण्डहरू उत्पादन गरेर कस्तो उच्च गुणस्तर र लागत-प्रभावकारी हेरचाह कस्तो देखिनुपर्दछ भन्ने गुणस्तरको स्तर निर्धारण गरेर विरामीको नतिजा सुधार गर्ने हो।
स्वास्थ्य संरक्षण को लागी राष्ट्रिय संस्थान। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि जिम्मेवार नयाँ संगठन। यो सार्वजनिक स्वास्थ्य इ England्ल्याण्ड प्रतिस्थापन र संयुक्त जैव सुरक्षा केन्द्र र NHS परीक्षण र ट्रेस सहित अन्य कार्य गर्दछ। यो वसन्त २०२१ मा परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य इ England्ल्यान्ड। स्वास्थ्य र सामाजिक सेवा विभाग को कार्यकारी एजेन्सी, यो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकालमा प्रतिक्रिया गर्न स्वास्थ्य असमानता कम गर्न देखि सार्वजनिक स्वास्थ्य को सबै पक्ष को लागी जिम्मेदार छ।
आपतकालिनहरूको लागि वैज्ञानिक सल्लाहकार समूह। आपतकालिन बेलायत बेलायत सरकारलाई वैज्ञानिक र प्राविधिक सल्लाह प्रदान गर्दछ।
व्यवहारमा स्वतन्त्र वैज्ञानिक महामारी इफ्लुएन्जा समूह। एक वैज्ञानिक समिति जुन व्यवहार विज्ञानको बारेमा सल्लाह प्रदान गर्दछ। COVID-१ of को सन्दर्भमा समितिले सुझाव दियो कि कसरी व्यक्तिहरुलाई सहयोग पुर्‍याउन मद्दत गर्न सकिन्छ। यसले SAGE लाई रिपोर्टहरू प्रदान गर्दछ।
मोडेलि onमा वैज्ञानिक महामारी रोग इन्फ्लुएन्जा समूह। एक वैज्ञानिक समिति जसले संक्रामक रोगको लागि बेलायतको प्रतिक्रियासँग सम्बन्धित वैज्ञानिक विषयमा सल्लाह प्रदान गर्दछ। यसको सल्लाह महामारी विज्ञान र मोडेलिंगमा विशेषज्ञतामा आधारित छ। यो SAGE लाई रिपोर्ट गर्दछ।